Nwa ma ihe na-eme nna ya obi ụtọ (1)
Onye na-arụsi ọrụ ike ga-aba ọgaranya (4)
Ọtụtụ okwu na-akpata mmehie (19)
Ngọzi Jehova na-eme mmadụ ọgaranya (22)
Ịtụ egwu Jehova na-eme ka mmadụ dị ogologo ndụ (27)
10 Ilu Solomọn.+ Nwa ma ihe na-eme nna ya obi ụtọ,+Ma nwa nzuzu na-eme ka nne ya na-eru uju. 2 Akụ̀ e ji aghụghọ kpata agaghị aba uru,Ma ezi omume ga-anapụta mmadụ n’ọnwụ.+ 3 Jehova agaghị ekwe ka agụụ gụgbuo onye ezi omume,+Ma ọ ga-eme ka ndị ajọ omume ghara inweta ihe na-agụsi ha ike. 4 Onye umengwụ ga-ada ogbenye,+Ma, onye na-arụsi ọrụ ike ga-aba ọgaranya.+ 5 Nwa na-aghọta ihe na-achịkọta ihe ubi n’oge okpomọkụ,Ma nwa iberiibe na-anọ n’ezigbo ụra n’oge a na-ewe ihe ubi.+ 6 A ga-agọzi onye ezi omume,+Ma okwu* onye ajọ omume na-eme ka a ghara ịmata ihe ọjọọ dị ya n’obi. 7 A ga-echeta onye ezi omume ma gọzie ya,+Ma aha ndị ajọ omume ga-efu.*+ 8 Onye ma ihe ga-anabata ntụziaka* e nyere ya,+Ma onye na-ekwu okwu nzuzu ga-ala n’iyi.+ 9 Obi ga-eru onye kwụsiri ike n’ebe Chineke nọ ala,+Ma a ga-agba ihe onye aghụghọ na-eme n’anwụ.+ 10 Onye na-atabi anya iji ghọgbuo mmadụ na-eme ka ndị ọ na-aghọgbu ruwe uju,+Onye na-ekwu okwu nzuzu ga-alakwa n’iyi.+ 11 Okwu* onye ezi omume na-eme ka mmadụ dị ndụ;+ Ma okwu onye ajọ omume na-eme ka a ghara ịmata ihe ọjọọ dị ya n’obi.+ 12 Ịkpọasị na-akpata esemokwu,Ma ịhụnanya na-ekpuchi mmejọ niile.+ 13 Ihe onye na-aghọta ihe na-ekwu na-egosi na ọ ma ihe,+Ma e mere ụtarị maka azụ onye na-enweghị uche.+ 14 Ndị ma ihe na-agbalịsi ike ka ha mụta ihe,+Ma ọnụ onye nzuzu na-etinye ya ná nsogbu.+ 15 Akụ̀ onye bara ọgaranya nwere bụụrụ ya obodo a rụsiri ike. Ịda ogbenye na-ala ndị ogbenye n’iyi.+ 16 Ihe onye ezi omume na-eme ga-eme ka ọ dị ndụ,Ma ihe onye ajọ omume na-eme ga-eme ka ọ na-eme mmehie.+ 17 Onye na-anabata aka ná ntị a dọrọ ya na-eme ka ndị ọzọ dị ndụ,*Ma onye na-anaghị eji mba a baara ya kpọrọ ihe na-edufu ndị ọzọ. 18 Onye na-eme ka a ghara ịmata na ọ kpọrọ mmadụ asị na-agha ụgha.+ Onye na-akọsa akụkọ ọjọọ* banyere ndị ọzọ dị nzuzu. 19 Mgbe mmadụ na-ekwu ọtụtụ okwu, ọ ga-emerịrị mmehie,+Ma onye na-ejide ọnụ ya aka na-egosi na o nwere uche.+ 20 Ire onye ezi omume dị ka ọlaọcha kacha mma,+Ma obi onye ajọ omume abachaghị uru. 21 Ihe onye ezi omume na-ekwu na-abara ọtụtụ ndị uru,*+Ma onye nzuzu na-anwụ maka na o nweghị uche.+ 22 Ọ bụ ngọzi Jehova na-eme mmadụ ọgaranya,+E nweghịkwa nsogbu* ya na ya na-eso. 23 Onye nzuzu na-ewere ime omume rụrụ arụ ka egwuregwu,Ma onye na-aghọta ihe nwere amamihe.+ 24 Ihe onye ajọ omume na-atụ ụjọ ya ga-abịara ya,Ma a ga-emere ndị ezi omume ihe na-agụ ha.+ 25 Mgbe oké ifufe ga-efe, onye ajọ omume ga-ala n’iyi,+Ma onye ezi omume dị ka ntọala ga-adịru mgbe ebighị ebi.+ 26 Otú ahụ mmanya gbara ụka si egbu ezé, anwụrụ ọkụ ana-afụkwa ụfụ n’anya,Ka ihe onye umengwụ na-eme si agbakasị onye dunyere ya ozi* ahụ́. 27 Ịtụ egwu Jehova na-eme ka mmadụ dị ogologo ndụ,+Ma a ga-eme ka ndị ajọ omume ghara ịdịte ndụ aka.+ 28 Ihe ndị ezi omume na-atụ anya ya* ga-eme ka ha ṅụrịa ọṅụ,+Ma ihe ndị ajọ omume na-atụ anya ya agaghị enwe isi.+ 29 Ihe Jehova na-eme* na-echebe onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta,+Ma ọ* na-eme ka ndị na-eme ihe ọjọọ laa n’iyi.+ 30 A gaghị eme ka onye ezi omume daa,+Ma ndị ajọ omume agaghịzi ebi n’ụwa.+ 31 Ihe juru onye ezi omume ọnụ bụ okwu amamihe,Ma a ga-ebepụ ire onye na-ekwu okwu ọjọọ. 32 Onye ezi omume na-ekwu ihe dị mma,Ma ihe juru ndị ajọ omume ọnụ bụ okwu ọjọọ.
^ Na Hibru, “ọnụ.”
^ Na Hibru, “ga-ere ure.”
^ O nwere ike ịbụ, “nọ n’ụzọ nke ndụ.”
^ Ma ọ bụ “na-akọsa asịrị.”
^ Ma ọ bụ “na-eduzi ọtụtụ ndị.”
^ Ma ọ bụ “ihe mgbu.”
^ Ma ọ bụ “onye ọ na-arụrụ ọrụ.”
^ Ma ọ bụ “Olileanya ndị ezi omume.”
^ Na Hibru, “Ụzọ Jehova.”
^ Ya bụ, ihe Chineke na-eme.